နားခိုရာ: September 2009
ဒီမနက် သတင်းတွေ ဟိုဒီလျှောက်ဖတ်ကြည့်ရင်း Google ကအသစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ Google Fast Flip ဆိုတာလေးကို လျှောက်ကြည့်မိတယ်။ popular သတင်းတွေ၊ latest news တွေ၊ လူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး အဖတ်အများဆုံးသတင်းတွေကို ကဏဿဍအလိုက် သတင်းရရှိရာ source အလိုက် တင်ထားပေးတယ်။ first page ကိုပဲ ဖှောပြပေးထားတာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ source သတင်း site ကို သွားဖတ်ရမယ်။
Google အနေနဲ့ Washington Post, Business Week, BBC, Newsweek စတဲ့ သတင်းဌာနတွေနဲ့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Fast Flip နဲ့ Goggle က အဓိကလုပ်ပေးချင်တာတွေကတော့
natural magazine-style navigation,
recommendations from friends and other members of the community and
a selection of content that is serendipitous and personalized.
read post from google blog
Posted by little moon at 11:12 AM2comments:
ဿငွFacebook နဲ့ သူ့ထဲက ဂိမ်းတွေက အတော့ကို အချိန်ကုန်စေတာပဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့မှာ facebook ထဲဝင် ဟိုလုပ်ဒီလုပ် လုပ်နေတဲ့ အချိန်တွေကမနည်းလှဘူး။ စိတ်အပန်းဖြေရုံဆိုလဲ ခဏဆိုတှောရောပေါ့ အဲဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူး။ မနက်ဆိုရုံးရောက်တာနဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်တာက email စစ်တာနဲ့ facebook ဝင်တာ။ ဘယ်သူတွေပါတွေများ ရေးထား share လုပ်ထားပါလိမ့်ပေါ့။ ဓါတ်ပုံတွေတင်ထားရင် ဝင်ကြည့် tag လုပ်၊ ဟိုပြောဒီပြောဝင်ပြော...
ပြီးတာနဲ့ gameတွေ စပါပြီ။ Mafia ထဲဝင်ပြီး jobတွေလုပ်တယ်။ stamina ကုန်တဲ့အထိတော့ ပစ်လိုက်သေးတယ်။ ငွေတွေကို bank ထဲထည့်တယ်။.. energy pack ပို့တယ် လက်ဆောင်တွေလက်ခံတယ်။ ပြန်ပို့တယ်။
နောက်တစ်ခါ farmville နဲ့ FarmTown .... စိုက်မယ်ပျိုးမယ် ရိတ်ကြမယ် ရောင်းကြမယ်ပေါ့။ FarmTown က online သူရင်းငှားငှားပြီး လယ်ထွန်တာ စိုက်တာလုပ်လို့ရတော့ နည်းနည်းသက်သာတာပေါ့။ ဒါတောင် connection မကောင်းလို့ လူငှားမရရင် သီးနှံတွေပုတ်ကုန်မှာစိုးတာနဲ့ ကိုယ်တိုင် ရိတ်ရရော။ တစ်ခါတစ်လေ FarmVille နဲ့ ဿFarmTown ဆော့ပြီးသွားရင် mouse နှိပ်ရလွန်းလို့ လက်တွေကို ညောင်းလို့ ....
ဒီကြားထဲ ငါးကလည်းမွေးလိုက်သေးတယ်။ ငါးတွေက တစ်နေ့တစ်ခါလောက်မှ အစာဝင်မကျွေးရင် သေကုန်ပြန်ရော။ ငါးကန်ကရေညှိတွေတက်နေလို့ တိုက်ပေးရသေး ....
ပြီးပြီလားဆိုတော့ အများကြီးကျန်သေးတယ်။ မြို့တည်ပြီးအခွန်ကောက် ပြီး စီမံခန့်ခွဲရတဲ Metropolis ဆိုတာကလည်း ဆော့သေး။ ကိုယ့်မြို့သူမြို့သားတွေ happiness ကျသွားရင် အခွန်အခမရတော့ဘူး။ ဒါကိုလည်းမှန်မှန်ဝင်ကြည့်ရသေး။ ပြီးရင် Zoo Builder ထဲမှာလည်း တရိစဿဆာန်ရုံလေးလည်း ဆောက်လိုက်သေး။ ဒါတောင် Castle Age တို့ Friend for Sale တို့ဆိုတာတွေရှိသေးတယ်။
ခုနကတင် ရုံးလာဖို့အိမ်ကအထွက် မိန်းမကမှာလိုက်သေးတယ်။ သူ့ငါးတွေကို အစာကျွေးလိုက်ပါဦးတဲ့ :)
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ခရီးသွားတုန်းက BKK Airport မှာအလကားပေးထားတဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ internet သုံးရင်းတောင် facebook ဝင်လိုက်သေး။ ကိုယ်သုံးပြီးတော့ ကိုယ့်နောက်ကစောင့်နေတဲ့ ဥရောပသူ အမျိုးသမီးလေးကလည်း facebook ပဲ။
တစ်ခါတလေစဉ်းစားမိတယ် facebook ဆိုတာကြီးပျက်သွားရင် မရှိတော့ရင် အချိန်တွေအတှော ပိုထွက်လာပြီး လူတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေမှာပဲလို့ ...
Posted by little moon at 10:25 AM4comments:
ကျွန်တော့်စက်ထဲက ဇော်ဂျီဖောင့်အဟောင်းကို ကိုစိုးမင်းရေးထားတဲ့ ဖောင့်အသစ်နဲ့ လက်ကွက် program နဲ့ ဒီနေ့မှ အောင်မြင်စွာပြောင်းလိုက်နိုင်ပါပြီ။ ကျွန်တော့် PC က Windows 2003 Server ပါ။ တလောက KeyMaster.exe ကို install လုပ်ပြီး စ run တော့ exceptional error ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ မအားတာနဲ့ ဒါကို မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ ဒီနေ့တော့ ညီလင်းဆက်လဲ online ရှိနေတာနဲ့ လှမ်းမေးလိုက်တော့ သူက ကိုစိုးမင်းကို တဆင့်မေးပေးမယ်တဲ့။
ဒါနဲ့ သူတို့ ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလုပ်လိုက်တော့ keymaster.exe အောင်မြင်စွာ run လို့ရသွားပါပြီ။ပြသဿသနာပေးနေတာက Windows ရဲ့ Data Execution Prevention (DEP) feature ပါ။ အဲဒါလေးကို disable လုပ်ပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။
My Computer ကို right click နှိပ် properties ကိုခေါ်ပါ။ “Advance” tab ထဲက Startup and Recovery ရဲ့ setting ကိုဝင်ပါ။
အဲဒီမှာ System startup … Default operating system ကို edit လုပ်ပါ။
NoExecute=….. ကို NoExecute=AlwaysOff လို့ပြောင်းပြီး save လုပ်လိုက်ပါ။
Windows ကို restart ပြန်လုပ်လိုက်တဲ့အခါ KeyMaster program ချောချောမောမော တက်လာပါလိမ့်မယ်။
အခုဒီပို့စ်ကို ဇော်ဂျီ၂၀၀၉နဲ့ ရိုက်ပါတယ်။
Posted by little moon at 5:08 PM4comments:
ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး Apple site သွားကြည့်ရင်း Snow Leopard Mac OS ကြော်ငြာထားတဲ့ နှင်းတွေနဲ့ ဒီကျားသစ်ပုံလေးကို သဘောကျလို့ ကူးလာတာ။
Posted by little moon at 1:57 PM 1 comment:
Posted by little moon at 1:51 PM2comments:
* ISO Range - expandable to 12,800.
* EOS Movie - Full HD video, options for 24 fps to create that cinematic feel.
* Dual DIGIC4processors
* Design - magnesium alloy body
ဒီနေ့ dpreview မှာသွားကြည့်ရင် ဒီ Camera လေးတွေ့မိလို့။ ဒီနေ့မှထွက်တာ။ ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ကိုယ့်ဆီမှာလည်း လက်ရှိ Canon Camera ရှိတယ်ဆိုတော့ မ၀ယ်နိုင်ပေမဲ့ ရသေ့စိတ်ဖြေ ပုံလေးတော့ download လုပ်ယူထားလိုက်တယ်။ ထီဆုကြီးပေါက်ရင်တော့ ၀ယ်ပြီးရိုက်ဦးမှာ .... :)
အသေးစိတ်သိချင်ရင် dpreview မှာသွားကြည့်ပါ။
Posted by little moon at 3:17 PM No comments: